Ubhuti omncane ka-Ayanda Ncwane usengumqondisi wengqephu – Isambane News
Home > Featured > Ubhuti omncane ka-Ayanda Ncwane usengumqondisi wengqephu
June 18, 2018 Isambane News
SamaJobe Zulu – Ulandela amaphupho akhe futhi ikusasa libukeka limkhanyela uPhupho Gumede (19) ongowesihlanu aphinde Abe ngowokugcina ezinganeni zakwaGumede okuzalwa khona no-Ayanda Ncwane ongumfelokazi wesilomo somculi wowokholo esingasekho uSfiso Ncwane. Ungumqondisi wengqephu kwi-Mamas and Papas Magazine nakwi Essay of Africa Magazine. Ebuzwa abeSambane News ukuthi wangena kanjani, uthi wayegqokise u-Ayanda ezovela ephepheni elingaphambili kulamabhuku bathanda indlela ayingenela ngakhona ingqephu base becela ukusebenzisana naye.
UPhupho owenza unyaka wokuqala ezifundweni ze-Bachelor of Arts enyuvesi yase-Johannesburg, uthi umuntu abukela kuyena uKim Kardashian West. Ebuzwa ukuthi ngobani, “Abantu abaningi abakuboni lokhu, uyisibonelo esihle futhi usebenza kanzima. Ubezigqokisela uParis Hilton noNicole Ricthie nje kodwa manje usedume umhlaba wonke. Ungumuntu ogqugquzelayo uma kuza ngakwezemfashini kanti futhi i-magazine enekhava yakhe idayisa kakhulu,” kubeka yena. Ebuzwa ngezithinta ezothando akafunanga ukwenaba kakhulu kodwa ukubeke kwacaca ukuthi abukho ubudlelwane abubona. Uthe ukhona amthandayo njengawo wonke umuntu uyaba nesithandwa senhliziyo, wale waphetha ukuphumela obala ngaye. “Angeke ngikwazi ukusho ukuthi ubani ngenxa yokuthi siyazana naye, ngakho-ke kungaba kubi uma sengithola ukuthi yena akazizwa ngendlela mina engizizwa ngayo,” kuqhuba yena.
Uthi isizathu sokuthi angabi nabo ubudlelwano Ucabanga ukuthi kungenxa yokuthi akukenzeki nokuthi-ke unake isikole namaphupho wakhe. UPhupho unabalandeli abangu-22 000 enkundleni yezokuxhumana lapho ebonakala khona efaka izithombe nabantu abadumile. Uthi angakujabulela ukwenza i-VOGUE futhi uzoyenza, nokuba ngumphathi wamaSAMA noma agqokise umuntu ozohamba i-Met Gala Stairs noma kube nguye uqobo.